कैटरिना देखि ऋतिकसम्म, जब यी सात स्टारले सेकेन्ड लिड रोल गर्न अस्विकार गरे - Medianp
कैटरिना देखि ऋतिकसम्म, जब यी सात स्टारले सेकेन्ड लिड रोल गर्न अस्विकार गरे
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक २५, २०७४१३:२७0
काठमाडौं, २५ कात्तिक । निर्देशक अली अब्बासको फिल्म ‘टाइगर जिन्दा है’ को ट्रेलर हालै रिलिज भएको छ । २२ डिसेम्बर रिलिज हुने यो फिल्ममा सलमान खान र कैटरिना कैफ लिड रोलमा छन् ।
कैटरिनाको गन्ती ती स्टारको सूचीमा हुन्छ, जसले फिल्ममा सेकेन्ड लिड रोल गर्न अस्विकार गरे । कैटरिनाले २०१२ मा आएको फिल्म ‘बर्फी’ मा इलियाना डिक्रुजले गरेको रोल अस्विकार गरेकी थिइन् । फिल्ममा अभिनेत्री प्रियंका चोपडा थिइन् ।
क–कसले गरे सेकेन्ड लिड रोल अस्विकार ?
कैटरिनाले २००३ मा आएको फिल्म ‘बूम’ बाट डेब्यू गरेकी हुन् । यसका अतिरिक्त उनले ‘सरकार’ २००५, ‘हमको दीवाना कर गए’ २००६, ‘पार्टनर’ २००७, ‘रेस’ २००८, ‘अजब प्रेम की गजब कहानी’ २००९, ‘एक था टाइगर’ २०१२, ‘धूम ३’ २०१३ लगायतका फिल्ममा काम गरेकी छिन् । उनले ‘बर्फी’ मा सेकेन्ड लिड रोलमा काम गर्न अस्विकार गरेकी थिइन् ।
२००४ मा आएको फिल्म ‘मै हुं ना’ मा शाहरुख खान र सुष्मिता सेन लिड रोलमा थिए । फिल्ममा सेकेन्ड लिड रोलको अफर ऋतिक रोशनलाई गरिएको थियो । तर उनले अस्विकार गरे । ऋतिकले अस्विकार गरेपछि उक्त रोल जायद खानलाई लिइयो । ऋतिक २००० मा आएको फिल्म ‘कहो ना प्यार हे’ बाट लिड रोलमा देखिन थालेका हुन् । यसका साथै उनले ‘कभी खुसी कभी गम’ २००१, ‘मैं प्रेमकी दीवानी हुँ,’ २००३, ‘कोई मिल गया’ २००३, ‘कृष ३’ २०१३, ‘ब्याङ ब्याङ’ २०१४, ‘काबिल’ २०१७ लगायतका फिल्ममा काम गरेका छन् ।
२००३ मा आएको फिल्म ‘कल हो ना हो’ मा सलमान खानलाई सेकेन्ड लिड रोल अफर भएको थियो । तर उनले अस्विकार गरे । त्यसपछि यो रोल सैफ अली खानलाई दिइयो । सलमाने आफ्नो अभिनय करिअर फिल्म ‘बीवी हो तो ऐसी’ १९८८ बाट सुरु गरेका थिए । यसका साथै उनले ‘साजन’, १९९१, ‘करन अर्जुन’, १९९५, ‘जुडुवा’ १९९७, ‘प्यार किया तो डरना क्या’ १९९८, ‘तेरे नाम’, २००३, ‘बडिगार्ड’ २०११ लगायतका फिल्ममा काम गरेका छन् ।
काजोललाई १९९७ मा आएको फिल्म ‘दिल तो पागल है’ मा सकेन्ड लिड रोल अफर गरिएको थियो । उनले उक्त अफर अस्विकार गरिन् । त्यसपछि त्यो रोलमा करिश्मा कपूरलाई ल्याइयो । फिल्ममा माधुरी दीक्षित लिड रोलमा थिइन् । काजोलले १९९२ मा आएको फिल्म ‘बेखुदी’ बाट डेब्यू गरेकी थिइन् । काजोलले ‘बाजिगर’ १९९३, ‘ये दिल्लगी’ १९९४, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगें’ १९९५, ‘इश्क’ १९९७, ‘यू मी और हम’ २००८, ‘माई नेम इज खान,’ २०१०, ‘दिलवाले’ २०१५ लगायतका फिल्ममा काम गरेकी छन् ।
५. शाहिद कपूर
शाहिदलाई २०१३ मा आएको फिल्म ‘वन्स ओपन अ टाइम इन मुम्बई दोबारा’ मा अक्षयकुमारसँग सेकन्ड लिड रोल अफर भएको थियो । तर उनले अस्विकार गरेपछि यो रोल इमरान खानलाई दिइयो । शाहिदले फिल्म ‘इश्क विश्क’ २००३ बाट डेब्यू गरेका थिए । उनले ‘फिदा २००४’, ‘शिखर’ २००५, ‘विवाह’, २००६, ‘जब वी मेट’ २००७, ‘हैदर’ २०१४ लगायतका फिल्ममा काम गरेका छन् ।
६. जूही चावला
१९९७ मा आएको फिल्म ‘दिल तो पागल है’ मा आएको सेकेन्ड लिड रोलको अफर जूहीले अस्विकार गरेकी थिइन् । त्यसपछि त्यो रोल करिश्मा कपूरलाई दिइएको थियो । फिल्मको लिड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित थिइन् । फिल्म सुपरहिट भएको थियो । जूहीले १९८६ मा आएको फिल्म ‘सल्तनत’बाट बलिउडमा कदम राखेकी थिइन् । उनले ‘कयामत से कयामत तक’ १९८८, ‘प्रतिबन्ध’ १९९०, ‘बोल राधा बोल’ १९९२, ‘डर’ १९९३ लगायतका फिल्ममा काम गरेकी छन् ।
८. सैफ अली खान
खैफले १९९८ मा आएको फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ को सेकेन्ड लिड रोलको अफर अस्विकार गरेका थिए । यो रोल सलमान खानले गरेका थिए । फिल्मको लिड रोलमा शाहरुख खान थिए । सैफले १९९३ मा आएको फिल्म ‘परम्परा’बाट डेब्यू गरेका थिए । उनले ‘आशिक आवारा’ १९९३, ‘मै खेलाडी तू अनाडी’ १९९४, ‘एक था राजा’ १९९६, ‘कच्चे धागे’ १९९९, ‘दिल चाहता है’ २००१, ‘रेस २’ २०१३ लगायतका फिल्ममा काम गरेका छन् ।
संसारकै अनौठा घरहरु (फोटोफिचर)
संसारकै ठुलो काठे घरमा ,जसको निर्माण गर्नमात्र १५ वर्ष लग्यो(भिडियो सहित)